iPartner 7အတွက်မြန်မြန်လေး စာရင်းပေးသွင်းလိုက်​ပါ
စောင့်နေရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ iPartner 7ပြန်လာပါပြီ. FBSပါတနာအားလုံးတို့အတွက်ပြိုင်ပွဲကြီးက အခုဒီမှာပြန်စနေပါပြီ!
ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် စာရင်းပေးလိုက်ပါ. တတ်နိုင်သမျှဖောက်သည်များများရှာဖွေပါ FBS တွင်စရံငွေထည့်ပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းပြီး အမှတ်များရအောင်ရှာဖွေပါ. အမှတ်များများရလေ အခွင့်အရေးများများရလေပဲဖြစ်ပါတယ်. အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင် ၃ဦးကို Retina 4K display မျက်နှာပြင်အကျယ် 21.5 လက်မရှိသည့် iMac, မျက်နှာပြင်အကျယ် 13 လက်မရှိသည့် MacBook Air1.6GHz 256 GB, နှင့် ရွှေရောင် iPhone7Plus 256 GBတို့ ကို ပထမဆု ဒုတိယဆု တတိယဆုတို့ အဖြစ် အသီးသီးချီးမြှင့်ပေးသွားမှာပါ.နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ၃ခုမှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ ပါတနာကို(iPartner 6sပြိုင်ပွဲ၊ လက်ရှိ iPartner 7ပြိုင်ပွဲ နှင့် နောက်လာမည့်ပြိင်ပွဲ) ရုရှားနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ရှိ FBSရုံးချုပ်သို့ တကယ့်ကို ကျကျနနအဆင့်မြင့်မြင့် သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ဆုကို ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်.
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀, ၂၀၁၇ ကနေ မတ်လ ၂၀, ၂၀၁၇အထိ iPartner 7ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံလိုက်ပါနဲ့ ။ အခုပဲစာရင်းပေးသွင်းပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ: